Testers malemy - Delta Engineering Belzika
Testeran'ny boka amboarina - 1 loha
Testeran'ny boka-miorina eo amin'ny lafiny ara-toekarena miaraka amina interface tsara, natao manokana ho an'ny fitsapana ny vokatra plastika.
Azo atambatra ao anaty masinina efa misy io unit io na koa azo ampiana amin'ny tsipika efa misy.
Published in Namboariny-In
Tester leak naorina namboarina miaraka amin'ny serasera graphic, natao manokana ho an'ny fitsapana ny vokatra plastika.
Testeran'ny boka amboarina - loha maromaro
Tester leak naorina namboarina miaraka amin'ny serasera graphic, natao manokana ho an'ny fitsapana ny vokatra plastika - loha 1 hatramin'ny 4.
Tester leak naorina namboarina miaraka amin'ny serasera graphic, natao manokana ho an'ny fitiliana bara plastika.
Alakamisy, 19 May 2016 by Delta Engineering
ABCDEF 1 UDK050 UDK055 UDK250 UDK310 UDK35X 2 3 nahitana tavoahangy lavo nifidy opt opt ​​opt ​​4 nosakanana barazy detection opt opt ​​opt ​​opt ​​5 opt detection opt opt ​​opt ​​opt ​​opt ​​6 UL / CSA fankatoavana vvvvv 7 fitsapana amin'ny running conveyor vvv
Published in Mihena ny fanerena, Testers malemy
Tester leak Ara-toekarena - loha 1
Tester leak-toekarena 1-lohany, natao manokana ho an'ny fitsapana ny vokatra plastika.
Published in voasakantsakan'ny
Alarobia 15 Jona 2016 by Cristina Maria Sunea
Testeran'ny boka feno - 1 loha
Mitsapa tester manana loha 1. Vato feno UDK050 arovana, natao manokana amin'ny fitsapana tavoahangy plastika tsy misy fotony.
Alarobia 01 aprily 2020 by Cristina Maria Sunea
Drobaka afon-tsavony - 1 loha
Tester leak izay misy loha 1, natao manokana ho an'ny fitsapana ny amponga L-peratra.
Talata 11 martsa 2014 by Delta Engineering
Tetezana tester - 1 loha
Fampivoarana mavitrika 1-loha tester leak, natao manokana hitsapana ireo plastika.
Tetezana tester - loha maromaro
Tester leaks ara-toekarena, natao manokana ho an'ny fitsapana ny vokatra plastika - 1 hatramin'ny 4 loha.